Qiimaha Cabbirka Samatabbixinta iyo Sicirada Inbox | Martech Zone
Haddii Adeegga Boostadu ku haysto qashin qashin ah xaruntooda oo, mar kasta oo ay arkaan gabal yar oo waraaqo qashin ah soo maraya dhammaantood waxay ku tuurayaan qashinka, miyaad u yeedhi lahayd tan la keenay? Dabcan maya! Si aan caadi aheyn ugu filan, in kastoo, warshadaha suuqgeynta emaylka emayl kasta oo la geeyo galka spam loo tiriyo sidii Bixiyay!
Natiijo ahaan, bixiyeyaasha emaylka ayaa si toos ah u sheegaya samatabbixin dhibcaha sida haddii ay yihiin wax lagu faani karo. Nasiib darro macaamiishooda, in kastoo, sumcadda soo diraha, oo ay weheliso tayada cinwaannada qaataha ee degel kasta, oo ay weheliso waxa ku jira iimaylku waxay soo saari karaan wax laga naxo meelaynta sanduuqa ee suuqleyda. Tani maahan wax ay soo sheegaan, in kastoo.
Taasi waa sababta ay shirkaduhu u qoraan adeegyada barnaamijyada sida 250ok. 250ok waxay siisaa dadka diraya liisaska abuurka ee la kormeerayo si loo arko in ololuhu ka dhigayo sanduuqa ama galka spam. Tani waxay siineysaa suuqleyda dhammaan warbixinnada lagama maarmaanka ah ee ay u baahan yihiin si ay u xalliyaan una saxaan arrimaha la soo gaarsiinta - ha ahaato tayada liistada, tayada nuxurka, ama arrimaha kaabayaasha.
250ok waa kafaala qaadayaasha Martech waxaana u adeegsanaa barnaamijkooda si aan ula socono oo aan u hagaajino sanduuqa sanduuqa. 250ok jecel yahay inuu tan ugu yeero kan heerka gaarsiinta dhabta ah. La socoshada meelayntani waxay macnaheedu noqon kartaa kumanaan doolar oo kordhay furitaan, guji iyo sicir beddelaad loogu talagalay suuqgeeyayaasha emaylka.
Tags: 250okquraafaad samatabbixinheerka gaarsiintaqiimaha guji emaylkaemaylka boostadaemaylka santuuqaku soo dir email qiimayaasha furanboosteejada emaylkaemaylka liistadasoo diraha emaylkaheerka sanduuqaqiimaha sanduuqaliisaskaheerka gaarsiinta dhabta ah